Adeegga online lacag la'aan ah. jaranjarada la taaban karo si toos ah
Xisaabinta jaranjarada toos ah uga la taaban karo
Miisaanka sawir 1: 0.25 0.5 1 1.5 2 3 4
height sallaan Y
Dhererka salaanka X
Dhererka dhufto ee A
oo dhumucdiisuna waxay of suufka B
dhumucdiisuna Guud Z
tallaabooyinka protrusion F
oo dhumucdiisuna waxay of tallaabooyinka G
filtarka xayiran on stage K
Ka caawi on xisaabinta sallaan toos ah uga la taaban karo
laba nooc oo wareega dhismaha loo soo xulay karaa xisaabinta.
size Qaabka jaranjarada la taaban karo mabda'a
Cabirka waa in milimitir.
X - Dhererka salaanka
W - width ee jaranjarada.
A - Dhererka dhufto ee. Haddii aad design ma bixiso garoon sallaan, dhigay dhererka madal = 0.
В - oo dhumucdiisuna waxay of suufka.
Z - dhumucdiisuna dheeraad ah. Taken tixgeliyaan oo kaliya nooca classic of jaranjarada.
F - Marxaladaha The qiyaas.
G - oo dhumucdiisuna waxay of tallaabooyinka. In qaabka classical sallaan waxaa loo isticmaalaa sida dhumucda protrusion ah F.
Xoojinta jaranjarada mabda'a.
Xoojinta waxaa sida caadiga ah loo isticmaalo oo kaliya in type 1 jaranjarada mabda'a.
Si kastaba ha ahaatee, waxa oo dhan waxay ku xiran tahay mashruuca.